“Khatarta Cunaqabataynta Hubka Soomaaliya Hadii Laga Qaado” Ibraahin Yuusuf Axmed ”Hawd” |
“Khatarta Cunaqabataynta Hubka Soomaaliya Hadii Laga Qaado” Ibraahin Yuusuf Axmed ”Hawd”
Madaxda Dawladda Federaalka Soomaaliya maalmahan wax ay u gucleynayaan in cunaqabataynta hubka ee dalka saaran la ga qaado. Dooddu waxaa weeye, Shabaab la ga ma adkaan karo nabadgelyadana la ma sugi karo haddii aan la helin ciidan iyo hub xooggan. Haddaba run ahaantii soomaalida dan ma u tahay maanta in hubka loo fasaxo?
Dunidu markii ay cunaqabataynta hubka soo rogtay soomaalida ayaa loo gu danaynayay waayo waxaa socday is xasuuq ba’an iyo colaad waalli ah. In kasta oo aanay cunaqabatayntu dagaallada joojin haddana shaki ku ma jiro khasaaruhu in uu aad u ga sii badan lahaa intii uu noqday haddii hubku furnaan lahaa. Maanta Soomaaliya dawladda ka jirta dunidu sharci ahaan waa ay aqoonsan tahay, laakiin weli waa dawlad dadkeedu aad u gu ka la qaybsan yahay. Ka la qaybsanaanta waxaa sal u ah kalsooni darro iyo baqdin ka dhexaysa bulshada. Sidii weligeedba dhici jirtay hadba qolada madaxweynuhu ka dhashay baa dawladnimada isa siisa oo cidaha kale ka xigsata, waxaana dhacda, ama in ay dhacdo la ga baqaa, qoladaasi in ay awoodda dawladda u adeegsato cidaha kale. Sababtaa dadrteed xukuumad wal oo la dhiso dadka xigsada ayaa siyaasaddeeda u ololeeya, oo tusaale ahaan ku taageera furista hubka iyo keenista ciidammo shisheeye. Qolyaha kalena waa sidaa beddelkeeda oo xukuumadda jirta ayay boqnaha gooyaan. Mar walba iyo weligeedba waa sidaa. Weli dawlad la gu wada kalsoon yahay la ma helin.Inta ay baqdinta iyo kalsooni darradu jirto colaad baa taagan, dagaal baana goorta uu doono qarxi kara, waayo dagaalku sidiisaba wax uu ka dhashaa baqdinta iyo aammin darraada. Hubka oo la furaa dhab ahaantii taas ayay sii xoojinaysaa. Wax uu kale oo hubku dhiirri gelinayaa in muran badan oo wadahadal u baahan in awood la isu adeegsado. Dhanka kalena dawladda waqtigan jirtaa qaabka qabiilaysan ee ay u dhisan tahay, jileeca sharciyadeed iyo goldaloollada maamul ee ka buuxa wax ay keeni kartaa hubkaasi in uu kooxo aan sharci ahayn gacanta u galo, sida imikaba dhacda. Taa ka sokow haddii hubka la fasaxo ma aha dawladda dhexe oo qudha cidda heli doontaa ee koox wal iyo gobol waliba fursaddaa wuu ka faa’iidaysan doonaa, hubka dunida toonsan ee lacagta la gu doonayo ayaana dhulka soomaalida ku soo butaacaya, waxaana bilaabmaya tartan hub is hubayn ah. Sidaa darteed ma habboona maanta Soomaaliya in ay noqoto suuq hubka u furan.
Taariikh ahaan waxaa sugan in aynnu lee nahay dhaqan colaadeed, xilkasnimadeenna ku saabsan maamulidda hubkuna aad iyo aad ayay u liidataa. Judhii dawladnimada la qaatay waxaa loo hub urursaday in la gu duulo dalalka deriska ah ee dhulalka soomaalida haysta. Dabadeed waxaa loo dagaal galay si xilkasnimo darro iyo ismiidaamin ah. Gelistii Dagaalka Soomaali Galbeed in ay ahayd siyaasad aan guuldarro iyo khasaare mooyee macno kale lahayn runteedii waa la hayaa, dalalka qudhoodii baana maanta soomaalida gacanta ku haya oo sida ay doonaan ka yeela. Intaa uun ma aha ee wixii aynnu dunida hub ka soo urursannay nafteenna ayaynnu ku halaagnay oo dhulkeenna ku duminnay. Innaga oo ka turjumaynna dhaqankeenna colaadeed, 40 sannadood kartideennii oo dhami wax ay ku baxday naf la gooyo iyo dhul la dumiyo.
Maamulka Xasan Sheekh Maxamuud hubka uu maanta u haliilayo marmarsiinyuhu waa in Shabaab la gu la dagaallamayo. Laakiin arrinku sidaa u ma fududa. Shabaab waa koox soomaaliyeed oo ka mid ah kooxaha badan ee loo qaybsan yahay. Waxa qudha ee ay kuwa kale ka ga duwan yihiin waa in aanay iyagu qabiil ahayn, iyo in shisheeyuhu sharaystay oo la col yahay. Shabaab ma aha wax samada ka yimid ee waa qayb ka mid ah bulshada soomaalida. Qabiilna iyagu ma laha laakiin wax ay ku tanaadaan oo ku tarmaan hadba gobolka dulmigu ka jiro ee qabiilooyinku is qabsadaan. Ma dhacdo mana dhici karto gobol nabadeed oo dadkiisu is oggol yahay in ay awood ku dhex yeeshaan. Taasina wax ay inoo xaqiijinaysaa Shabaab in uu ka mid yahay ka la qaybsanaanta iyo heshiis la’aanta bulsheed. Maalinta ay qabiilooyinku nabdaan, ee kalsooni iyo caddaalad la helo, maalintaa Shabaab ma jirayaan. Inta ka horreysana xitaa haddi nukliyeer loo adeegsado la ga ma adkaan karo, waayo la waayi maayo dad soomaaliyeed oo iyaga badbaado u arka.
Foolxumada u gu weyn ee hubka oo la fasaxo ka dhalan kartaa waa dagaal la gu riiqdo oo dhex mara Dawladda Federaalka iyo Somaliland. Sida aynnu wada og nahay 26 sannadood ee Soomaalilaand jirtay sababta qudha ee aanay maamulladii Koonfurta la ga dhisi jiray u gu soo duulin waa itaal la’aan xaggaa ka jirtay. Muddadaa intii maamul ee Soomaaliya soo martay ma ahayn dawlado taabbagalay, awooddooduna xitaa ma wada gaadhsiisnayn xaafadaha Xamar. Berigaa fog ilaa maanta, maamul kasta oo Soomaaliya awood ku yeelan lahaa, oo heli lahaa hub iyo ciidan dhaqaaqi kara, wax shaki ahi ku ma jiraan in uu is ku dayi lahaa xoog in uu ku soo celiyo waxa Koonfur loo ga yaqaan ”Gobolka Waqooyi Galbeed”. Ilaahay innagu ma keeno, haddii se dagaal labada dhinac ahi maalin uun dhaco, wax uu noqon doonaa mid aad u foolxun, waayo waxaa hagaya labada halkudhig ee ah ”midnimada Soomaaliya waa muqaddas” iyo ”madaxbannaanida Soomaalilaand waa muqaddas”.
Kol haddii aynnu dhaqan ahaan caynkaa nahay, soona marnay dagaal ka mid ah kuwii taariikhda dunida u gu foolxumaa u guna dheeraa, waxaa wanaagsan in aynnu qaadanno mabda’a nabadda oo ay dadyow badani ku liibaaneen. Mana qummana in la gu degdego ciidan dhisid iyo is hubayn goortan ah. Waxaa loo baahan yahay in awood iyo tamar la geliyo laba qodob: 1) Dhisidda ciidan ammaan oo tayo leh kana adkaan kara nabadgelyada bulshada dhexdeeda; 2) Ka shaqaynta kalsooni, xasillooni iyo caddaalad umadda ka la irdhowday la gu dhex beero.